भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ-NepalKanoon.com
-बरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनाली
राजा त्रिभुवन बिरविक्रम शाहादेव
के हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा हाम्रा राणा प्रधानमन्त्री स्वयं आफै तिनलाई सिकार खेलाउन ठोरी वा त्यस्तै ठाउंमा पुग्ने गर्दथे । त्यो हाम्रो वास्तविक हैसियत थियो ।
डराएर परिवार सहित भारत पलायन भएका राजा त्रिभुवन कलकत्तामा बोरिस लिसानेविचले संचालन गरेको “Club 300” रेष्टुरेन्टमा सुरा र सून्दरी विच भुल्न थाल्दा थाल्दै उनले नचाहदा नचाहदै पनि भारतको तत्कालिन राजनैतिक शक्तिले सरकार संचालनको निम्ती सहयोगी साथ लगाएर जवरजस्ती नेपाल पठाएपछी त्यसलाई हामीले गर्वको रुपमा लियौ र तिनै त्रिभुवनको सालिक सहिदगेटमा उच्च स्थानमा प्रतिष्ठापन पनि गर्यो ।
तिनै त्रिभुवनले बोरिस दम्पतीलाई ज्यादेनै अनुनय विनय गरेर नेपालमा बोलाएको र सौभाग्यवश तिनै दम्पतीको प्रयासको कारण हालको निर्वाचन आयोगको भवनमा Royal hotel को स्थापना भै नेपालले पर्यटनको ढोका खोल्न सफल भयो ।
राजा महेन्द्र बिरविक्रम शाहादेव
बोरिस लिसानेविचको सम्बन्धमा लेखिएको (Tiger for breakfast) भन्ने किताव पढन योग्य छ ।
तत्कालिन राजा त्रिभुवनले के गरे गरेनन म त्यसतर्फ जान जाहन्न । सो को कुनै औचित्य पनि छैन । तर, राजा त्रिभुवनवाट आर्थिक रुपमा हेपिएका, पहिलो पत्नी इन्द्रराज्यलक्ष्मीको मृत्युपछी उनकी वहिनी रत्नराज्यलक्ष्मीलाई विवाह गर्न मरिहत्ते गरेका तत्कालिन युवराज महेन्द्रलाई राजा त्रिभुवनले गरेको न्यूनतम ब्यवहार सायद धेरैलाई थाहा पनि नहोला ।
तिनै त्रिभुवनले बोरिस दम्पतीलाई ज्यादेनै अनुनय विनय गरेर नेपालमा बोलाएको र सौभाग्यवश तिनै दम्पतीको प्रयासको कारण हालको निर्वाचन आयोगको भवनमा Royal hotel को स्थापना भै नेपालले पर्यटनको ढोका खोल्न सफल भयो । बोरिस लिसानेविचको सम्बन्धमा लेखिएको (Tiger for breakfast) भन्ने किताव पढन योग्य छ ।
तत्कालिन राजा त्रिभुवनले के गरे गरेनन म त्यसतर्फ जान जाहन्न । सो को कुनै औचित्य पनि छैन । तर, राजा त्रिभुवनवाट आर्थिक रुपमा हेपिएका, पहिलो पत्नी इन्द्रराज्यलक्ष्मीको
प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओली
मृत्युपछी उनकी वहिनी रत्नराज्यलक्ष्मीलाई विवाह गर्न मरिहत्ते गरेका तत्कालिन युवराज महेन्द्रलाई राजा त्रिभुवनले गरेको न्यूनतम ब्यवहार सायद धेरैलाई थाहा पनि नहोला ।
राजा त्रिभुवनको असहयोगको कारण रत्नराज्यलक्ष्मीलाई विवाह गर्न उनले अरुसंग सरसापट समेत गर्नुपरेको वारे पनि हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्ला । तर, तिनै महेन्द्र जव राजा भए तव उनले क्रमिक रुपमा राणाको पालामा अग्रेज ( भारत र राणापछी स्वतन्त्र) भारतलाई नेपालको तर्फबाट भैरहेको ज्यु हजुरीको प्रथाको अनत्य गर्ने प्रयाश गरे र सफल पनि भए ।
यस्को श्रेय निर्विवाद रुपमा राष्ट्रभक्त राजा महेन्दलाई नै जान्छ । तिनै राष्ट्रभक्त राजाको छोटो समयको नेतृत्वको परिणामस्वरुप नेपालको परराष्ट्र निती, आर्थिक निति, भुमिसुधार निति, शिक्षा निति, पूर्व पक्षिम राजमार्गको परिकल्पना, विभिन्न कलकारखाना लगायतका जे जती पनि आज छ र जे जती हामीले विगतमा तहस नहस गर्यो त्यो सवैनै राजा महेन्द्रको देन थियो । राजा महेन्द्रलेनै हामीलाई सेवक वाट वास्तविक नागरिकको स्थानमा पुर्याउन सफल भएका हुन ।
त्यसपछी राजा विरेन्द्र जो लर्ड हन्टिगटनको सच्चा विध्यार्थि थिए जस्ले (political order in changing society) भन्ने किताको दर्शन राजा विरेन्द्रलाई घोकाएका थिए । जसमध्ये उक्त कितावमा दिईएको प्रेशर कुकरको उदाहरण राजा विरेन्द्रले आफ्नो जीवनकालमा केही हदमा प्रयोग पनि गरेको थिए । उनको सम्वन्धमा धेरै उल्लेख गर्न चाहन्न ९उनको भित्री महत्वाकांक्षाको बारेमा सुधिर शर्माको किताववाट पनि केही थाहा पाउन सकिन्छ ।
उनले मुलुकको निम्ती कुनै नराम्रो काम नगरेपनि नागार्जुन दरबारमा बसेर Royal Salute को चुस्कीको मजा लिने बाहेक उनको पालामा कुनै उपलब्धिमुलक कार्य भएको मलाई लाग्दैन । त्यपछीको ईतिहास केवल भारतको चाकडीमानै वित्यो ।
उदाहरणको रुपमा दिवंगत शुर्यबहादुर थापा भारत सरकारको नजिकको मित्र हुनुहुन्थ्यो । वहा बेलाबखतमा भारत भ्रमणमा गैरहनुहुन्थ्यो । वहा साउथ ब्लकमा जानुहुन्थ्यो । नेपालको डेस्क हेर्ने दोश्रो दर्जाको कर्मचारीलाई आफ्नो याचना र फेहरिस्त सुनाएर आउनुहुथ्यो । ति कर्मचारीको अर्ति उपदेशमा कुनै प्रतिकार नजनाएर जिहा जिहा भनेर फर्किनु हुन्थ्यो ।
त्यसलाई भारत भ्रमणको ठूलो उपब्धिको रुपमा लिने गरिनथ्यो । लगभग सवैले गर्ने र गरेको पनि त्यही हो । आफुलाई भारतले पत्याउछकी भनेर आशा गर्दा गर्दै माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएकोमा असहमती जनाउने क्रममा बर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीमा पलाएको भारत प्रतिको कडां रवैया कालान्तरमा फल्दै फुल्दै आज पूर्ण रुपमा बर पिपलको बृक्षको रुपमा खडा भएको छ ।
राजा महेन्द्र पछाडी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलिको नेतृत्वमा हामी नेपालीले वास्तविक नेपाली नागरिक भएको अनुभूती गरिरहेका छौ । आज भारत र नेपालको सम्वन्ध राजनैतिक रुपमा बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ ।
त्यसमा किमार्थ पनि तलमाथि नहोस । जस्तै सुकै विषम परिस्थितीको सामना हामी नेपालीले किन गर्नु नपरोस अव हामी भारतको अगाडी झुक्न हुदैन । यदी यो परिस्थितीमा हामी टिक्यौ भने हामी सदाको लागि सार्वभौम नेपाली भएर उभ्भिन सक्छौ।
हामी भारतको सानो भाई भएर हैन समान राष्ट्र्को हैसियतमा विश्व सामु खडा हुन चाहन्छौ । यो नै मेरो अन्तश्करणको कामना हो । त्यसर्थ, भविष्यको उपलब्धी प्रति प्रधानमन्त्री ओलिलाई अग्रिम रुपमा शुभकामना दिन चाहन्छु ।